Wargeysyo: Porsgrun: Sadex Caruur soomaali ah oo aan iskuulka dib ugu soo noqon. - NorSom News
Wargeysyo: Porsgrun: Sadex Caruur soomaali ah oo aan iskuulka dib ugu soo noqon.
Wargeyska Varden iyo wargeystada lokalka ah ee magaalada Porsgrunn ayaa labadii maalmood ee ugu danbeeyay aad u hadalhayay kiis ku saabsan sadex caruur soomaali ah oo ay sheegeen in la la´yahay meesha ay ku danbeeyeen.
Maamulaha iskuulka ay dhiganayeen caruurtan ayaa sheegay in caruurtan la waayay wixii ka danbeeyay 13-ka bishii Disember ee sanadkii hore. Waxeyna maqnaanshaha ilmaha ee iskuulka ku wargaliyaan booliska oo sheegay ineysan wali ogeyn meesha ay ku danbeeyeen sadexdaas ilmood ee soomaalida ah.
Booliska oo u waramay wargeyska Varden ayaa sheegay booqasho ku tageen xaafadii ay degenayeen qoyska ilmaha dhalay, balse aysan halkaas cidna kula kulmin. Waxeyna raaciyeen ineysan hubin inay ilmaha iyo hooyadood ay wali Norway joogaan ama wadan kale oo Yurub ah.
Booliska ayaa sidoo kale wargeyska u sheegay inay hubin doonaan in ilmahaas ay ku suganyihiin dalka Sweden, balse aysan xaqiijin karin meesha ay Sweden kaga sugnaan karaan xiligan. Sidoo kalena ay dhici karto in ilmahan ay xiligan ku suganyihiin Soomaaliya ama wadan kale oo Yurub ah.
Dariska guriga ay qoyskan degenaayeen ayaa wargeyska u sheegay in ilmaha iyo hooyadood halmar la waayay, xaafadana laga dareemayo ineysan cidna xiligan joogin.
Khilaaf barnevernka ah:
Dhowr qof oo uu wargeyska kiiskan qoray ka wareystay arintan, ayaa u xaqiijiyay inuu jiray khilaaf ka dhaxeeyay hooyada caruurtan iyo hey´adda barnevernka. Waxeyna sheegeen inuu jiray kiis barnevern ah oo qoyska iyo hey´adaas u furnaa.
Xigasho/kilde: Varden: Tre barn savnet fra skole i Porsgrunn
Previous articleNorway oo soo qaadeyso Hooyo Daacish ku biirtay iyo ilmaheeda oo xanuunsan.
Next articleNorway: 140 qof oo soomaali ah ayaa 2019 wadanka ka bixinay.